GPS iyo Google Earth ee Iskaashiga - Geofumadas
Ogast, 2012 Baridda CAD / GIS, Google Earth / Maps, GPS / Qalabka
4 sano kadib dib u eegis gvSIG iyo Iskaashiga, waxaan ku faraxsanahay in aan faafinno daabacaadda cusub Arnalichm waa urur xirfadlayaal ah oo abuuray si loo xoojiyo saameynta hay'adaha bani'aadamnimada oo leh taageero farsamo, adeegyo la-talin iyo tababar ku saabsan bii'ada nadaafada biyaha iyo wax soosaarka deegaanka.
Waxaan tixraacaynaa buug cusub:
GPS iyo Google Earth ee Iskaashiga.
Dukumiinti waxay si xun u canbaaraynaysaa heerka fudud, sharraxaadda sawirada faahfaahsan, tallaabooyinka iyo laylisyada taariikh ahaaneed ee abuurista, wadaagista iyo isticmaalka iskaashiga macluumaadka juqraafka iyadoo la adeegsanayo khayraadka ku jira webka, oo ay ku jiraan Google Earth, Google Docs, GPS Babel, GPS Muuqaalka, Dropbox, iyo kuwa kale.
Xaqiiqdii waa muhiim muhiim ah waqtigan oo ku dhowaad wax kasta oo aan sameyno wuxuu leeyahay asal kobcineed, waana inaan ku muujinnaa hab wax ku ool ah. Iyadoo dukumiintiguna aysan diiradda saaraynin heerar ballaaran, waxay ka dhigaysaa xikmadda si ay u aragto in qalabka fudud uu muujin karo natiijooyinka.
Halbeegga dukumiintiga waxaa lagu dhajiyay ugu yaraan afar qaybood oo kala duwan:
Qofka kowaad wuxuu ka hadlaa Google Earth, mabaadi'da hoose ee isticmaalka lakabyada iyo isticmaalka qalabka. Waa wax iska cad in qayb ka this waxaa hadhay, waayo, dadka isticmaala ee heerka caadiga ah si kastaba ha ahaatee waxaa muhiim ah in ilaa xad in dokumentiyada sida yeelan karaan ee macnaha guud ee go'aan sameeyayaal inta badan waa dad khibrad sare oo duurka ku ah horumarka bulshada, laakiin in yar cusbooneysii waxa lagu sameyn karo qalabka kombiyuutarka aasaasiga ah.
Ku dhowaad ciyaarta, Google Earth wuxuu noqday aalad qiimo leh oo ujeeddooyin ah waxbarashada y dibad baxyo ee arjiga cilmiga dhulka oo markii hore ay maamuli karaan oo kaliya takhasusle. Taasna, dukumeentiga ayaa u muuqda inuu diiradda saarayo fiiro gaar ah oo la xidhiidha maadooyinka sida:
Isku-kalsoonida fikradda ee lakabada macluumaadka
Abuuri dhibcooyin, xariiqyo iyo garaado badan
Faylasha furan kml / kmz
Fikradayda, waxay ku dhacdaa gaaban iyadoo la tixraacayo sida loo sameeyo faylka kml ee ka baxsan Google Earth. Sida caadiga ah dadka waxay leeyihiin qaab layers nooca file, billabo ama bandhigay DXF sugaya in Google Earth, oo waxaan u malaynayaa in this laga yaabaa in qayb ka mid in ugu yaraan xuso waxa barnaamijyada samayn karaa diinta this.
Cutubka labaad wuxuu diiradda saarayaa isticmaalka GPS, oo leh heer aad u ballaaran oo loogu talagalay kuwa yareeyn kara mawduuca cutubka koowaad. Noocyada aasaasiga ah, si aad u sharaxan, sida ay u jiraan dukumiintiyo kale; laakiin qiimaha dheeraadka ah ayaa ku jira mawduucyada mawduucyada, sababtoo ah meel ka baxsan loona soo guuriyey / la soo dhaafay ayaa diiradda saaraya fududaynta qofka aan aqoonin mawduuca laakiin leh waqti yar oo uu fahmo.
Marka laga reebo mawduucyada asaasiga ah ee juqraafi, saadaasha, aragtida muraayadda, isticmaalka iyo qaabeynta GPS, waxa ugu xiisaha badan waa isku xirnaanta Google Earth si joogto ah mawduuca cutubka koowaad. Kuwa kuwa ka bilaabanaya goobta GPS waxay qaybtan oo kale tahay mid aad u wanaagsan, dadaal weyn oo lagu soo koobayo arrimaha ugu muhiimsan ee aragtida iyo iyaga oo ka soocaya farsamooyinka, farsamada iyo taariikhda.
Cutubka saddexaad waa jimicsi oo ka kaca heerka dhibka, laga bilaabo abuurista lakabyada isticmaalka sare ee Excel ee qaababka mawduucyada khariidadaha lagu daabacay internetka laga bilaabo faylasha csv.
Heerkan, isticmaalayaasha kuwaasi oo u maleynayey inay ogaadeen wax walba oo ku saabsan Google Earth ayaa la yaabi kara, sababtoo ah waxay muujineysaa sida loo sameeyo faylasha ama halyeeyga ku jira koofurta oo lagu arki karo iyadoo muujinaysa lakabka Google Earth.
La wadaag oo iskaashi
Ugu dambeyntii wuxuu sharxayaa sida aad uga shaqayn karto si iskaashi Internetka.
Gebogabadii: Waxyaabo muhiim ah oo aanu hubinno in aan helno wax cusub, laakiin ka sarreeya dhammaan waxaad ku dhiiri galin kartid dadka aanan bilaabin arimahan si ay u noqdaan kuwo xiiso leh oo ku saabsan juquraafi.
Waxaan kugula talinayaa in aad fiirsato oo aad ku kaydiso xamaasaddaada sababtoo ah maalin kasta ma imanayso oo ku sii wadi internetka warkan.
Halkan waxaad ka iibsan kartaa buugga http://www.arnalich.com/es/goops.html
Halkan waxaad ka heli kartaa akhri internetka
Jimicsiga buuggan wuxuu noqon karaa soo qaado halkan
Post Previous«Previous Koorsada GvSIG waxaa lagu dabaqay Dalabka Xuduudaha
Post Next Pixels dhawaanNext »